Waa la daabacay20.06.2022
Xuquuqda shaqaalaha waxaa Finland lagu qoray sharciga heshiisyada shuruudaha shaqada. Waxaa lagu heshiiyay tusaale ahaan mushaarka, wakhtiga shaqada, fasaxyada iyo shuruudaha kale. Marka meel cusub ka shaqo billowdo, waxaa wanaagsan in shaqo-bixiyaha lala galo heshiiska shaqada oo qoraal ah, kaas oo lagu qorayo dhammaan shuruudaha xiriirka shaqada.
Heerka mushaaraadka ee Finland
Heshiisyada shuruudaha shaqada
Sharraxaadda qoraalka ee shuruudaha samaynta shaqada
Sharciga Finland ma qorayo inta uu dhan yahay mushaarka ay tahay in shaqaalaha la siiyo. Shaqo-bixiyayaasha iyo shaqaalaha ayaa waxay si wadajir ah heshiiska shuruudaha shaqada (työehtosopimus) uga heshiiyeen musharaadka. Ogeysiisyada boosaska shaqooyinka bannaan iyo heshiisyada shaqada ayaa waxaa ku qornaan kara, in mushaarku yahay TES, yacni mid waafaqsan heshiiska shuruudda shaqada.
Haddii laanta shaqada aanu lahayn heshiiska shuruudda shaqada, shaqo-bixiyaha iyo shaqaalaha ayaa ka heshiin kara mushaarka. Sharcigu wuxuu qabaa, in mushaarku uu noqdaa mid caadi ah oo macquul ah, yacni waa in aad heshaa mushaar la mid ah kan ay qaataan shaqaalaha qabta shaqadaada oo kale. Waxaad mushaarka isku barbardhigi kartaa tusaale ahaan adeegyada laga helo internetka. Waxaad sidoo kale macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan heerka mushaarka shaqadaada weydiin kartaa Ururada shaqaalaha .
Waxaa laga yaabaa in lagu weydiiyo mushaarka aad rajaynayso, marka aad shaqada codsanayso, Faahfaahin dheeraad ah oo mowduuca ku saabsan ka aqri bogga InfoFinland Arjiga shaqada iyo waxbarashada iyo waayo aragnimada shaqada (CV) .
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan sicirka iyo sicirka maciishadda ee Finland ka aqri bogga InfoFinland: Heerka sicirka Finland .
Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaOikotie.fi
Isbarbardhigga mushaarkaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Shaqada waxaa laga bixin karaa mushaar ku salaysan saac, todobaad ama bil. Shaqooyin qaar waxaa laga bixiyaa mushaar kunturaad ah oo ku salaysan natiijada shaqada la qabtay. Ka sokow lacagta, mushaarka waxaa lagu bixin karaa wax faa’iido leh. Shaqo-bixiyuhu wuxuu tusaale ahaan ku siin karaan telefoon aad isicmaasho ama wuxuu bixin karaa qadadaada. Kuwaa waxaa loogu yeeraa faa’iido dhaqaale oo mushaarka ka baxsan (luontoisetu).
Shaqo-bixiyuhu waa in uu mushaarka ku soo shubaa akoonkaada bangiga maalinta lagu heshiiyay ee ku qoran heshiiska shaqada. Inta badan waxaa mushaarka la bixiyaa bishiiba mar ama labadii todobaadba mar. Haddii maalinta mushaarka la bixinayo ay ku soo aaddo dhammaadka todobaadka ama maalin fasax ah, mushaarka waxaa la bixiyaa maalinta ka horreysay ee la shaqaynayo. Waxaa kale oo mushaarka la qaadanayaa muddada jirrada iyo fasaxa sannadka.
Shaqo-bixiyuhu waa inuu ku siiyaa xisaabta mushaarka (palkkalaskelma) mar kaska oo aad mushaar hesho. Mar kasta hubi, in macluumaadka ku qoran xisaabta mushaarku uu sax yahay. Qoro saacadaha aad shaqaysay, waxaa markaas kuu fududaanaya hubinta xisaabta. Xisaabta mushaarka waxaad ku arkaysaa, wakhtiga mushaarka lagaa siiyay iyo inta uu mushaarku dhan yahay. Waxaa kale oo aad xisaabta mushaarka ku arkaysaa, inta ay dhan tahay canshuurta iyo kharashka kale ee mushaarkaada laga jaray.
Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaSAK
Mushaarka FinlandLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaTyösuojeluhallinto
Macluumaadka bixinta mushaarkaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Wakhtiga shaqada waxaa loola jeedaa wakhtiga qabashada shaqada loo isticmaalay, markaas oo ay tahay in shaqaaluhu uu joogo gaabta shaqada ama uu diyaar u yahay isticmaalka shaqo-bixiyaha. Finland waxaa wakhtiga shaqada xeerinaya sharciga wakhtiga shaqada iyo heshiiska shuruudaha shaqada.
Wakhtiga shaqada ee laamaha shaqadu waa kala duwan yihiin. Sida uu sharcigu qabo, wakhtiga shaqadu wuxuu noqon karaa ugu badnaan 8 saacadood afar iyo labaatanka saac iyo 40 saacadood todobaadki.
Wakhtiga shaqada ee aan go’nayn waxaa loola jeedaa, in aad adigu go’aansan karto wakhtiga aad shaqada maalinta billaabayso iyo wakhtiga aad joojinayso.
I-sbeddelayaa waxaadna samayn kartaa tusaale ahaan shaqo subxeed, shaqo galbeed ama shaqo habeen. Shaqo-bixiyuhu waa in uu sameeyaa liiska kaltanka shaqada adiguna waa in aad liiska aragtaa ugu dambayn toddobaad ka hor inta aanu toddobaadka shaqadu billaaban.
Haddii uu shaqo-bixiyuhu kaa dalbado in aan qabato shaqo dheeraad ah, yacni shaqada dheeraadka ah ee la sameeyo wakhtiga shaqada ee rasmiga ah ka dib, waa in aad ka heshaas shaqadaas mushaar la kordhiyay. Qasab kuguma ahan in aad shaqo dheeraad ah qabato.
Shaqadu waxay noqon kartaa shaqo buuxda ama shaqo saacado yar ah. Shaqo buuxda waxaa loola jeedaa, inaad samaynayso shaqo maalinta oo dhan ah, inta badan shan maalmood toddobaadki. Shaqo saacado yar ah waxaa loola jeedaa, in aad shaqada qabanayso qayb maalinta ka mid ah oo kaliya ama qayb toddobaadka ka mid ah.
Waxaa heshiiska shaqada lagula heshiin karaa wakhtiga shaqada ee isbedbeddela. Markaas ma jiro wakhti shaqo oo rasmi ah oo lagu heshiiyay ee tirada saacadaha lagu heshiiyay ayaa waxay noqon karaa 10-30 saacadood ama 0-40 saacadood todobaadki. Haddii lagu heshiiyay in tirada ugu yar shaqadu ay noqoto muddo cayiman oo la og yahay eber saac, waxa laga hadlayo waa heshiis eber saac ah. Shaqo-bixiyaha ayaa markaas shaqaale u yeeraya marka uu u baahdo, shaqo-bixiyuhuna kuma qasbana in uu ku siiyo saacado shaqo. Haddii aadan helin saacado shaqo, mushaarna heli meysid. Heshiiska wakhtiga shaqada ee is-bedbeddelaayo waa in uu leeyahay sabab waana loo cusboonaysiiyaa si waafaqsan sida ay u kororto baahida shaqaale ee shaqo-bixiyaha. Haddii ay suurtagal tahay, ha samayn heshiiska eber saac ah ee gal wada xaajood ah in heshiiska shaqada lagu qoro saacadaha shaqo ee ugu yar.
Wakhtiga shaqadaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Heshiiska eber saacLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Heshiisyada shuruudda shaqada waxaa looga heshiiyaa shuruudaha shaqada, kuwaas oo ay tahay in laamaha shaqooyinka qaarkood loogu hoggaansamo. Waxaa lagu heshiiyay tusaale ahaan mushaarka, wakhtiga shaqada iyo fasaxyada. Heshiiska waxaa gaaraya ururada shaqo-bixiyayaasha iyo shaqaalaha. Inta badan waxaa heshiiska shuruudda shaqada loo soo gaabiyaa TES. Marka uu shaqo-bixiyuhu yahay degmo ama dowlad, waxaa loo hoggaansamayaa heshiish shuruudaha xilka (VES) ama heshiiska shuruudda xilka guud iyo shaqada ee degmada (KVTES).
Ku dhowaad dhammaan laamaha shaqooyinku waxay leeyihiin heshiiska shuruudda shaqada oo u gaar ah. Tusaale ahaan laanta ganacsiga, laanta dhismaha iyo laanta dalxiisku waxay leeyihiin heshiiska shuruudaha shaqada oo u gaar ah. Si fiican uga bogo heshiiska laantaada shaqada. Waxaa laga helaa goobtaada shaqada, ururka shaqaalaha ama internetka.
Heshiiska shuruudda shaqada waxaa looga heshiiyaa shuruudaha ay tahay in ugu yaraan ay laantaas shaqadu u hoggaansanto. Heshiiska shaqadu shuruudahaan kama hoosmari karo. Tusaale ahaan mushaarku kama yaraan karo kan looga heshiiyay heshiiska shuruudda shaqada. Si kastaba ha ahaatee, shaqo-bixiyaha iyo shaqaaluhu waxay heshiiska shuruudda shaqada ku gaari karaan shuruudo kuwa caadiga ah ka wanaagsan.
Heshiiska shuruudda shaqadu wuxuu qabanayaa ururada shaqo-bixiyayaasha iyo shaqaalaha iyo xubnahooda. Heshiiska shuruudaha shaqadu wuxuu noqon karaa mid dhammaan qabanaya. Heshiiska dadka oo dhan qabanaya waa in ay shaqo-bxiyayaasha oo dhami raacaan, haddii aanay xubin ka ahayn urur shaqo-bixiye ah.
Waxaa kale oo aad arrintan kaga bogaa bogga InfoFinland Ururada shaqaalaha .
La samee shaqo-bixiyaha heshiiska shaqada oo qoraal ah, marka aad shaqo cusub billowdo. Heshiiska shaqada waxaa lagu qorayaa hawlaha shaqada, mushaarka, shuruudaha kale iyo shuruudaha xiriirka shaqada sida faa’iidada telefoonka iyo qadada.
Heshiiska shaqadu wuxuu noqon karaa mid afka ah. Waxaase wanaagsa in la sameeyo heshiis shaqo oo qoraal ah. Shaqo-bixiyaha iyo shaqaaluhu waxay heshiiskaas qoraalka ah ka hubin karaan arrimihi lagu heshiiyay, haddii uu muran ka dhasho shaqada.
Inta aadan saxiixin ka hor, si fiican u aqri heshiiska shaqada. Haddii aadan meelaha qaar fahmin, weydii shaqo-bixiyaha. Marka aad heshiiska saxiixdo, waxaad aqbashay shuruuddiisa. Faahfaahin dheeraad oo ah oo ku saabsan samaynta heshiiska shaqada ka aqri bogga InfoFinland Waxyaabaha uu ka kooban yahay heshiiska shaqadu .
Samaynta heshiiska shaqadaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Shaqo-bixiyuhu waa in uu ku siiyaa sharraxaadda shuruudaha shaqada oo qoraal ah, haddii aadan samaynin heshiis shaqo oo qoraal ah. Looma baahna in sharraxaad laga bixiyo shaqada hal bil ka yar.
Sharraxaadda waa in lagu qoraa
shaqa-bixiyaha iyo shaqaalaha meesha ay deggan yihiin ama goobta ganacsiga
waqtiga ay shaqadu bilaabanayso
wakhtiga uu soconayo heshiiska shaqada ee wakhtiga xaddidan iyo sababta
googta shaqada lagu qabanayo
waxa uu qabanayo qofka shaqaalaha ahi
shuruuda heshiiska shaqo ee la dabaqayo
sababaha mushaarka iyo wakhtiga mushaarka la bixinayo
waqtiga shaqada ee joogtada ah
fasaxa sanadka iyo sida loo helo
waqtiga shaqo ka eryidda.
Waa la ganaaxi karaa shaqo-bixiyaha, haddii aanu shaqaalaha siin sharraxaadda laga rabo.